संगठनात्मक र संचार कौशल - के प्रत्येक व्यवस्थापक हुनु पर्छ मालिक छ। यो पेशामा को प्रतिनिधिहरु, को पाठ्यक्रम, निरन्तर मान्छे अन्तरक्रिया, र यसैले सम्भव हरेक तरिकामा मेरो विचार तिनीहरूलाई संवाद गर्न सक्षम हुनुपर्छ। बिना व्यवस्थापन सफलता विशेष विधि र तरिकाहरू हासिल छैन।
संचार व्यवस्थापन - यस छैन बस दिइरहनुभएको र कुनै पनि जानकारी, विनिमय जानकारी वा अनुभव प्राप्त प्रक्रिया छ। यो कम्पनीले यो हुनु पर्छ ठ्याक्कै संचालित सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। प्रबन्धक उनको समय उनको सबैभन्दा बिताउनुहुन्छ।
संचार व्यवस्थापन सबै कर्मचारीहरु को गतिविधिहरु समन्वय गर्ने क्षमता प्रदान गर्दछ कारण लागि यति महत्त्वपूर्ण छ। यो पनि बाह्य सम्पर्क सबै किसिमका निर्माण गर्न अनुमति दिन्छ।
तेर्सो र ठाडो: व्यवस्थापनमा आन्तरिक संचार दुई समूह विभाजित छन्। आफूलाई गरेर, ठाडो संचार आरोही र घटते विभाजित छन्। को उकालो संचार अन्तर्गत प्रत्यक्ष अधीनस्थ प्रबन्धकहरू जानकारी स्थानान्तरणका को प्रक्रिया बुझ्ने गरिन्छ। अक्सर, को त-प्रसारित रिपोर्ट, सुधार को लागि सुझाव, र यति मा।
व्यवस्थापनमा शीर्ष-तल संचार - छ जानकारी को स्थानान्तरण आफ्नो subordinates गर्न प्रबन्धकहरू देखि।
तेर्सो संचार नै स्तर मा स्थित सदस्यहरु बीच जानकारी र जानकारी साटासाट छन्। तेर्सो लिंक को माध्यम ले, नियम, त्यहाँ अनुभव हस्तान्तरण, यी काम को परिणाम मा व्यक्तिगत जानकारी छ। व्यवस्थापनमा पारस्परिक संचार तिनीहरूले कुनै पनि समूह भित्र मनोवैज्ञानिक जलवायु स्थापित मद्दत संग किनभने एक ठूलो हदसम्म महत्त्वपूर्ण छन्।
बाह्य संचार - उद्यमी जानकारी विनिमय बाहिर ठाउँ लिइरहेको छ। अर्को शब्दमा, कम्पनी र बाहिर सम्पर्क गर्नुहोस्। संचार को यस प्रकारको नयाँ ग्राहकहरु, नयाँ प्रविधिहरू र यति मा बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न उपभोक्ताहरु को इच्छा विश्लेषण गर्न, पुरानो संग अन्तरक्रिया आकर्षित सुधार गर्न मद्दत गर्छ।
धेरै अक्सर दरमा जानकारी उद्यम को दक्षता मा निर्भर गर्दछ। आवश्यक विश्वसनीय जानकारी ढिलाइ र कुनै पनि ढिलाइ बिना चाहनुहुन्छ जहाँ वितरित भने मात्र सबै राम्रो हुन सक्छ।
गलत जानकारी प्रमुख समस्या हुन सक्छ। यो उद्यम को विफलता मात्र होइन कारण हुनेछ, तर यो पनि यसको विनाश निम्त्याउन सक्छ। कुनै पनि तरिकामा प्राप्त सबै जानकारी तत्काल निरीक्षण गर्न विषय हुनुपर्छ। झूटा जानकारी दिन सक्छ जो कर्मचारीहरु, विशेष नियन्त्रणमा हुनुपर्छ।
संचार अन्य सुविधाहरू आधारमा समूह विभाजन गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि, मौखिक र छन् गैर-मौखिक संचार व्यवस्थापनमा। मौखिक संचार जो जानकारी प्रसारण गरेर शब्द प्रयोग गरिन्छ प्रक्रिया रूपमा बुझे। तुरुन्तै, हामी मनमा छ कि छैन केवल बोलिएका शब्दहरू तर पनि लिखित याद गर्नुहोस्।
उद्यमी को लिखित रूप धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यो सम्पूर्ण कागजात सम्बन्धित छ। लेनदेन मा जोड मौखिक आश्वासन मा छैन, र दस्तावेज भनेर विश्वास गर्न गाह्रो छैन।
जब गैर-मौखिक संचार इशाराहरू, अनुहार अभिव्यक्ति, लग र सामान सबै किसिमका समावेश छ। प्रायजसो, यी दुवै संचार को प्रकार प्रत्येक अन्य पूरक। केही परिस्थिति मा केही विरोधाभास पालन गर्न सम्भव छ। तिनीहरूले एक व्यक्ति उहाँले के भन्छ, त्यसैले यसलाई आफ्नो साँचो सम्बन्ध लुकाउने र विश्वास गर्दैन भन्ने तथ्यलाई सम्बन्धित हुन सक्छ। अक्सर, उल्लेखनीय मान्छे को गैर-मौखिक संचार, पूर्ण वा आंशिक रूपमा आफ्नो झूट प्रकट गर्छ।
उद्यमी को निश्चित सम्पत्ति र उत्पादन प्रक्रियामा आफ्नो भूमिका
माल को प्रतिस्पर्धा
यी लक्ष्य हासिल गर्न एक तरिका रूपमा रणनीतिक व्यवस्थापन।
Yandex मुद्रा मार्फत ऋण अनलाइन
जहाँ सुरु गर्न - हामी एक घरेलु ठोस पूल निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ?
ओवन मा टर्की स्तन Bake: आफ्नो प्रियजनलाई चकित!
एक्रिलिक टाँसन: लाभ, प्रकार र प्रयोग को सुविधाहरू
एक सर्पिल सीढी: आकार, डिजाइन, स्थापना, सामाग्री
2014 मा Thinnest फोन - उड आँधी स्लिम